HomeBusinessInternationalကျွန်တော်တို့ အစားအသောက်မလိုဘူး၊ နှာခေါင်းစည်းပဲ လိုတယ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ရှေ့တန်းမှ ဆောင်ရွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော သြစတြေးလျရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ကျေးဇူးတင်စာလွှာများကို နေ့စဥ်ပင် လက်ခံရရှိနေပြီး အချို့လူများကတော့ ပီဇာများယူလာပေးတတ်ကြကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းတို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းမှာ ရောဂါပိုးကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်မပေးနိုင်သော လက်လုပ် မျက်နှာအကာအကွယ်များကို အစားထိုးနိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော နှာခေါင်းစည်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ဆေးရုံအချို့ရှိ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများမှာ N95 နှားခေါင်းစည်းများကို ရရှိရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသော်လည်း လမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေသည့် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများကတော့ အဆိုပါ နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရေးသား ပေးပို့တဲ့ စာတွေကို ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းရတယ်။ တချို့ဆိုရင် ပီဇာလိုမျိုး စားစရာတွေတောင်ယူလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ‘ကျွန်တော်တို့ အစားအသောက်တွေမလိုဘူး၊ နှာခေါင်းစည်းပဲလိုတယ်’လို့ ပြောလိုက်ချင်တယ်” ဟု အကြီးတန်း ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ရပ်ကွက်ထဲ သွားရင် တွေ့လိမ့်မယ်၊ လူတွေအများကြီး N95 တွေ တပ်ထားကြတယ်။ ဆေးရုံမှာတော့ N95 လုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး” ဟု New South Wales မှာ အဆိုပါ ဆရာဝန်ကပြောသည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှု ၅၇၀၀ ရှိနေရာ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ထိုဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တနင်္လာနေ့ကဆိုလျှင် လူသေဆုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဒေသလည်းဖြစ်သည်။
အရေးပေါ် ဆရာဝန်နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်လျှောက်မှုဝန်ထမ်းများ သမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကတော့ အကာအကွယ်ပစ္စည်း (PPE)များ သိုလှောင်ထားရှိထားကြောင်း၊ ထို့အပြင် ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားထားသည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် New South Wales ရှိ အချို့ဆေးရုံများတွင်တော့ အရည်အသွေးမြင့်သော N95 နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပလပ်စတစ်နှင့် သားရည်ကွင်းများကို အသုံးပြုလျက်ပြုလုပ်ထားသည့် လက်ဖြစ် မျက်နှာအကာအကွယ်များကိုသာ အသုံးပြုနေရသည်။
“တချို့ဆိုရင် ရေငုတ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေတောင် သုံးနေရတယ်” ဟု Australian Medical Association မှ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးဖြစ်သူ Andrew Miller ကပြောသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု အနည်းငယ်သာရှိစဥ်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် PPE အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်မှာ ယခုအခါတွင် ရောဂါပြန့်နှံ့မှု ကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့် အဆိုပါ လမ်းညွှန်ချက်မှာ မပြည့်စုံတော့ကြောင်း ကျန်းမာရေးလုပ်သားများကဆိုသည်။
အဆင့်မြင့် PPE ကို COVID-19 လူနာတွေနှင့် ထိတွေ့ကုသချိန်တွင်သာ လိုအပ်သည်မဟုတ်ဘဲ ဆေးရုံတစ်ရုံလုံးတွင် ဝတ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အရေးပေါ်ဌာနတွင် ဝတ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
ရှေ့တန်းမှာ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများထံ ဖြန့်ဝေထားခြင်းမရှိသေးသော PPEဝတ်စုံများ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အများအပြားသိုလှောင်ထားမှုရှိကြောင်း Miller ကဆိုသည်။
“တခြားနိုင်ငံက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ PPE မရှိလို့ အသက်ဆုံးရှုံးနေရတာကို တွေ့မြင်ထားရတော့ သြစတြေးလျနိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်း သူတို့လိုတဲ့အခါ PPE တွေ့ရနိုင်မယ်လို့ မယုံကြဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် N95 နှာခေါင်းစည်းနှင့် အခြား အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားဒေသများတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဒေါသထွက်ကာ ဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
သြစတြေးလျ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် PPE ဝတ်စုံများ အသုံးပြုခွင့်ရရေး ဝန်ကြီးချုပ် Scott Morrison ထံ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုစာ တင်ပြထားသည်။ အဆိုပါ တောင်းဆိုစာတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း တစ်သိန်းခွဲကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့ အစိုးရအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် နှာခေါင်းစည်း ၁၀သန်း ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်အိပ်၊ ဝတ်စုံ၊ မျက်နှာ တွေအပါအဝင် နောက်ထပ်လည်း ထပ်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်”ဟု ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
New South Wales ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကတော့ အစိုးရဆေးရုံများတွင် P2 နှာခေါင်းစည်းများ၊ လက်သန့်ဆေးများအပါအတွင် PPE ဝတ်စုံများအလုံအလောက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေသခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်း တစ်နေ့လျှင် N95 နှာခေါင်းစည်း ခြောက်သောင်း ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Queensland ပြည်နယ်အစိုးရက ဆိုသည်။
အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် PPE မည်ရွေ့မည်မျှ ရနိုင်မည်၊ ပိုမိုလိုအပ်လာသည့်အခါတွင် လောက်ငှမှုရှိနိုင်မရှိနိုင်တို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်သည်ဟု Health Service Union ဥက္ကဋ္ဌ Gerard Hayes က ပြောသည်။
“ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပေါ် ဖိအားတွေများလာ၊ လိုအပ်ချက်တွေများလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ လျှောင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဘယ်လောက်များတယ်၊ ဘယ်လို ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်လင်းသိရရင်ကောင်းမယ်။ ဒါမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်း အားတက်မယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ တိုးလာမယ်။ အခုတော့ သူတို့မှာ ယုံကြည်မှုမရှိရှာကြဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
SYDNEY, April6(Reuters) – Australian hospital workers on the coronavirus frontline say they daily receive letters of thanks, some people even bring them pizzas, but what they really need is proper respiratory face masks to replace faulty and homemade face shields.
Gerard Hayes, the national president of the Health Service Union, said authorities needed to be transparent on how much PPE will be available and whether it will be enough if demand surges
“That will give confidence to our members. Right now they don’t have that confidence.” (Reporting by Lincoln Feast and Swati Pandey; Editing by Michael Perry)
Previous articleမြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်
Next articleဥရောပသမဂ္ဂသည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသော အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများကို ကျပ် ၇၅၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀၀ အထိ သုံးလအထိ ပေးအပ်သွားမည်